आज चकलेट दिवसः के–के छन् चकलेटका फाइदा ?
अर्थसंसार काठमाडौँ – प्रणय दिवस नजिकिदै गर्दा आज बिहीबार विश्वभर चकलेट डे मनाइँदै छ । के तपाईले आफ्नो प्रेमी या प्रेमिकालाई चकलेट दिनुभयो ? तपाईलाई चटलेटको फाइदाको बारेमा थाहा छ ? यस्ता छन् चकलेटका फाइदा । ...
आज प्रपोज डेः आफुले मन परेको मान्छेलाई कसरी गर्ने प्रपोज ?
अर्थ संसार काठमाडौँ– के तपार्इंले आफूलाई मन परेको मान्छेलाई प्रपोज गर्नुभयो ? धेरै पटक प्रपोज गर्दा पनि आफ्नो प्रेमी तथा प्रेमिकाले अस्किार गरेर हैरान हुनुहुन्छ ? आफूले मन पराएको मान्छे नपाएर निरास हुनुहुन्छ ? प्रणय दिवस नजिकिँदै गर्दा आज (बुधबार) विश्वभर ‘प्रपोज डे’ मनाइँदै छ । यस्ता छन् प्रपोज गर्ने केही रोमान्टिक तरिका । ...
सस्तोमा सेयर किन्ने ? बोलकबोलमा आउँदैछ म्युचुअल फन्डको इकाइ
अर्थ संसार काठमाडौं–तपाईं बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा म्युचुअल फन्डहरुको इकाइ किन्न चाहनु हुन्छ ? एनआईसी एशिया बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको विभिन्न बैंकले ल्याएका म्युअल फन्डको इकाइ बोलपत्रमार्फत विक्री गर्दै छ । ...
आज रोज डेः के हुन्छ विभिन्न रङको गुलाबको अर्थ ?
अर्थसंसार काठमाडौँ – प्रणय दिवस नजिकिदै गर्दा आज विश्वभर ‘रोज डे’ मनाइँदै छ । प्रणय दिवसकै लागि भनेर ५० लाख रुपैयाँ बराबरको गुलाबको फूल भारतबाट नेपालमा आयात गरिएको छ । पछिल्लो समय युवापुस्ता माझ प्रणय दिवसको महत्व बढ्दै गएको देखिन्छ । ...
अमलाको आरन गजल संग्रह सार्वजनिक
अर्थ संसार काठमाडौँ–गजलकार अमला अधिकारीको तेस्रो गजल सङ्ग्रह आरन राजधानीमा सार्वजनिक गरिएको छ । यसअघि गजलकार अधिकारीको अमला (२०६८) र आगो (२०६९) मा प्रकाशित भएका थिए । गजलसङ्ग्रह अमलाले मधुवन वर्ष पुरस्कारसमेत प्राप्त गरेको थियो । ...
कोइरालाको थातथलोमा कवि धरणीधरको सम्झना
अर्थ संसार दुम्जा (सिन्धुली)–जागरण कवि धरणीधर कोइरालाको १२५ औं जयन्ती कविकै जन्मगाउँ कुशेश्वर दुम्जामा चित्रकला प्रदर्शनी, कविता वाचन र सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित मनाइएको छ । ...
सिन्धुलीमा पहिलो पटक लिटिल प्रिन्स एण्ड प्रिन्सेस् [फोटो फिचर]
अर्थ संसार काठमाडौं–सिन्धुलीमा पहिलोपल्ट लिटिल प्रिन्स एण्ड प्रिन्सेस् प्रतिस्पर्धा भएको छ । वालवालिकामा लुकेर रहेको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउन ग्ल्यामरस नेपालले सिनियर गर्लस, सिनियर ब्वाइज, जुनियर गर्लस र जुनियर ब्वाइज गरी ४ फरक प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । ...
नेपाल फेशन आइडल २०१७ हुने
अर्थ संसार काठमाडौ–रसलाईट मिडियाले सौन्दर्य प्रतियोगिता गर्ने भएको छ । मोडलिङ क्षेत्रमा आउन चाहने युवायुवतीलाई लक्षित गरेर ‘नेपाल फेशन आईडल २०१७’ हुने भएको छ । प्रतियोगिताका लागि फर्म खुल्ला भएको छ । ...